Inona no atao hoe marika? | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 4, 2016 Zoma, Jolay 8, 2016 Douglas Karr
Raha hanaiky na inona na inona momba ny fandaniana roa-polo taona amin'ny marketing aho, dia ny tena marina fa tsy azoko tsara ny fiantraikan'ny a marika manerana ny ezaka marketing rehetra. Na dia toa fanambarana mahatsikaiky aza izany dia satria ny fihenan-tsofina amin'ny fanaovana marika na ny ezaka tsy mampino amin'ny fanitsiana ny fahatsapana ny marika dia tena sarotra lavitra noho ny noeritreretiko.
Raha te hanao fanoharana dia mpandrafitra miasa ao an-trano ny mitovy aminy. Ny mpandrafitra dia mety hahatakatra ny fomba fanamboarana rindrina, hametahana takelaka, sisiny sy haingon-trano, hametahana tafo, ary amin'ny ankapobeny manangana trano hatrany am-potony. Fa raha tsy eo afovoany na vaky ilay fototra, dia ho fantany fa nisy zavatra tsy nety nefa tsy azony hoe ahoana no fanitsiana ny olana. Ary io olana io dia hisy akony amin'ny asany rehetra.
Ny traikefa sy fahatsapana momba ny vokatra na orinasa manana anarana manokana, izay nomena tamin'ny alàlan'ny famantarana azy, ny famolavolana manaraka ary ny feo maneho izany.
Izany no mahatonga antsika matetika mitondra mpanolo-tsaina marika amin'ny firotsahana ankehitriny rehefa mametraka fanontaniana vitsivitsy isika ary tsy mahazo valiny mazava alohan'ny hanombohantsika mamolavola paikady marketing ho an'ny mpanjifa:
Ahoana ny fahitan'ny prospect sy ny mpanjifanao ny fisehoana ny masonao?
Iza no mpanjifa kendrena ary mpanapa-kevitra amin'ny fanaovana raharaha amin'ny marikao?
Inona no mampiavaka anao amin'ireo mpifaninana aminao? Ahoana no fahitana anao raha ampitahaina amin'ireo mpifaninana aminao?
Inona ny feon'ny atiny sy ny volavola ampiasanao hiresahana mahomby amin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao?
Raha mijery akaiky ireo fanontaniana ireo ianao, dia kely lavitra ny momba izay tianao hamoronana sy bebe kokoa momba ny fomba fahitana ny zavatra noforoninao. Araka ny voalazan'ny horonantsary dia izay no fiheveran'ny olona anao amin'ny ambaratonga mampihetsi-po.
Ity horonantsary avy amin'ny Borshoff manontany sy mamaly ny fanontaniana amin'ity horonantsary ity taona vitsivitsy lasa izay rehefa nandalo famerenanana izy ireo, Inona no ao amin'ny marika?
Miaraka amin'ny fananganana marobe ny haino aman-jery nomerika - ahitana media sosialy, fijoroana vavolombelona, ​​ary atiny tsy manam-petra - ny marika dia manana fotoana sarotra kokoa mitazona ny lazany, manamboatra ny lazany, na manao fanitsiana amin'ny marika misy azy ireo. Izay rehetra vokarinao na izay novokarin'ny olon-kafa momba ny vokatrao, serivisinao, orinasa ary olonao dia misy fiantraikany amin'ny marikao.
Tags: fahafahana misafidyborshoffmarikamarketing marikafanekena marikalazan'ny marikamarikainona ny marika